AmaThugi okanye iiThugge zaseIndiya
Iingxowa okanye iiThugge zahlelwa ngamagqirha aphulo-mthetho aseIndiya awathatha amaqabane ezohwebo kunye nabahambi abacebileyo. Basebenzisa njengentlangano eyimfihlo, kwaye kaninzi babandakanyeka ngamanye amalungu ahloniphekileyo kuluntu. Inkokheli yeqela leThuggee lalibizwa ngokuba yi- jemadar , igama elisetyenziselwa ukuba 'ngumphathi-boss'.
Izigubhu zaziza kudibana nabahamba ngeendlela kwaye zibahlobo, ngezinye iinkampu zihamba kunye nazo iintsuku eziliqela.
Xa ixesha lilungile, iiThugs ziza kubamba kunye nokuphanga abo bahamba nabo abangaboniyo, bengcwaba imizimba yabantu babo amaxhoba ekungabikho kwindlela, okanye abaphosa emithonjeni.
Iingxowa ziyakwazi ukuba khona ekuqaleni kwekhulu le-13 CE. Nangona amalungu eqela avela kwimvelaphi yamaHindu kunye namaSilamsi, kunye nawo onke ama-castes ahlukeneyo, babelana ekunqulekeni koothixokazi wamaHindu wokutshatyalaliswa nokuvuselela, uKali . Abahambi ababuleweyo babecingelwa njengeminikelo kwithixokazikazi. Ukubulala kwakubaluleke kakhulu; AmaThugs awazange afune ukuchitha nayiphi na igazi, ngoko ngokuqhelekileyo baqhankqalaza amaxhoba abo ngentambo okanye nge-sash. Ipesenti ethile yezinto ezibiweyo ziya kunikwa kwi tempile okanye kwindawo yokuhlonela oothixokazi.
Amanye amadoda adlula phantsi imasiko kunye neemfihlelo zeThugs kubantwana babo. Abanye abaqeshwe baya kufundela ukusekela i-Thug masters, okanye i-gurus, kwaye bafunde urhwebo ngaleyo ndlela.
Ngamanye amaxesha, abantwana abancinci ababehamba kunye nexhoba baya kwamkelwa yi-Thug clan kwaye baqeqeshwa ngendlela yeeThugs, ngokunjalo.
Kuyinto engaqhelekanga ukuba ezinye zeThugs ziyiMuslim, zanikwa ubukhulu beKali kwihlelo. Eyokuqala, ukubulala kuyenqatshelwe kwiQuran, ngaphandle kokubulawa okusemthethweni kuphela: "Musa ukubulala umphefumlo owenziwe nguThixo ...
Nabani na obulala umphefumlo, ngaphandle kokuba kubulawe okanye ukuphosa inkohlakalo emhlabeni, kuya kuba ngathi wayebulale bonke uluntu. "U-Islam ubuqine kakhulu ukuba kukho uThixo oyedwa oyinyaniso, ngoko ukwenza imihlatshelo yabantu kuKali un-Islamic.
Nangona kunjalo, iiHuggs zombini zamaHindu namaSilamsi zaqhubeka ziphanga abantu abahamba ngeyona ndlela ngoku iNdiya nePakistan ngekhulu le-19. Amagosa aseburhulumenteni aseBrithani ngexesha laseBrithani eRain bekhatyiswa kakubi ngenxa yokuxhatshazwa kweeThugs, kwaye baqhelisela ukukhusela inkolo yokubulala. Bamisela ipolisa ekhethekileyo ngokukhethekileyo ukuzingela iiThugs, kwaye ipapashe nayiphi na inkcazelo malunga nokunyakaza kweThugege ukuze abahambi bangathathwa bengazi. Amawaka awatyhola amaThugs abanjwe. Bayeza kubulawa bexhomeke, bavalelwe ubomi, okanye bathunyelwe ekuthinjweni. Ngo-1870, abaninzi abantu bakholelwa ukuba iiThugs zachithwa.
Igama elithi "Thug" livela kwisiTurkey thagi , esithathwe kwiSanskrit sthaga esithetha ukuba "u-scoundrel" okanye "ubuqili." Emazantsi e-Indiya, iiThugs ziyaziwa ngokuba yiPhansigar, ezibonisa "umgcawuli" okanye "umsebenzisi we-garotte," emva kohlobo lwabo oluthandayo lokuthumela amaxhoba abo.
10 Amazwi Ngama-Chameleon
Anne Hathaway - Umfazi kaWilliam Shakespeare
Funda ukuphela kweShicilelo sesihlanu sokuSungulwa kweeLatin
Izindlela zoPhuhliso loPhuhliso lwabaTitshala